Liverpool oo Heshiis la gaartay Thiago - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Liverpool oo Heshiis la gaartay Thiago
Bayern Munich ayaa xaqiijisay in Liverpool ay heshiis la gaartay Thiago Alcantara.
Kooxda heysata horyaalka Premier League ayaa ku dhow inay u dhaqaaqdo 29 jirkaan ka dib markii ay heshiis 30 milyan ginni ah kala gaareen Bayern Munich.
Liverpool ayaa markii hore diiday inay la kulanto qiimaha ay Bayern ku dooneyso ciyaryahanka, laakiin waxaa la fahamsan yahay in labada dhinacba ay ka adkaadeen caqabadaas iyagoo ogolaaday in heshiiska lagu bixiyo muddo afar sano ah.
Dhanka kale, Thiago ayaa ogolaaday heshiis afar sano ah oo uu ugu biirayo kooxda Jurgen Klopp wuxuuna xiran doonaa maaliyada No.6 marka uu dhameystiro ku biiristiisa Anfield.
‘Waxaan xaqiijin karaa in FC Bayern ay ugu dambayntii heshiis la gaartay Liverpool,’ Madaxaweynaha Bayern Karl-Heinz Rummenigge ayaa u sheegay Bild.
‘Waxay aheyd hamiga weyn ee Thiago inuu sameeyo wax cusub dhamaadka xirfadiisa ciyaareed.’
Jurgen Klopp ayaa aad u jecel Thiago, kaasoo ku guuleystay 7 horyaal oo Bundesliga ah iyo Champions League toddobadii sano ee uu joogay Bayern.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Spain ayaa sidoo kale soo jiitay xiisaha Manchester United xagaagan, laakiin kooxda Ole Gunnar Solskjaer ayaa dib loo dhigay heshiiska ay ku dooneysay sababo la xiriira mushaharka ciyaaryahanka khadka dhexe.
Thiago ayaa noqon doona saxiixii labaad ee Liverpool xagaagan kadib markii ay kala soo wareegeen daafaca bidix ee reer Greek Kostas Tsimikas kooxda Olympiacos adduun dhan £ 11.75m bishii Ogosto.
Wararka ayaa sheegaya in Thiago uu tijaabada caafimaadka u mari doono Liverpool saacadaha sooscda laakiin lama shaacin doono wakhtiga si uu kulankiisii ugu horeeyay u ciyaaro iyadoo Reds ay la ciyaareyso Chelsea maalinta Axada.
Previous articleRag ka Ganacsada Hubka sharci darrada oo malaayiin doollar ku kala wareegsaday Xawaaladaha Soomaalida
Next articleArsenal oo saxiixii saddexaad ku dhawaaqeysa